राेचक – Annapurna Post News
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on जब नाच्दा नाच्दै गयो ४०० जनाको ज्यान, खुसी कि पागलपन, भूत–प्रेतको भुमिका ?
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा नाचले सधैं खुशी दिन्छ भन्ने मान्यता छ । यो फिटनेस को एक तरिका हो । यो आफैलाई व्यक्त गर्ने एक राम्रो तरिका पनि हो । तर सन् १५१८ मा, नृत्य रोमन साम्राज्यको एक शहरमा मानिसहरूको लागि मृत्युको कारण बन्यो । इतिहासकारहरूले त्यस घटनालाई ‘डान्सिङ प्लेग’ नाम दिएका छन् । १५१८ को […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on केटीका बाबुको लाश पछाडि राखेर केटाले गरे बिहेको प्रस्ताव
काठमाडौं । सामान्यतया चलचित्रमा प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई प्रपोज गर्न कुनै रोचक तरिका अपनाउने गरेको देखेका छौँ ।तर के तपाईंले वास्तविक जीवनमा त्यस्तो देख्नुभएको छ ? सायद नदेख्नु भएको हुनुपर्छ । आज हामी त्यस्तै एक घटना लिएर आएका छौँ । एक व्यक्तिले आफ्नो बुबाको अन्त्येष्टिको समयमा आफ्नो प्रेमिकालाई प्रपोज गरेका हुन् । हो, दक्षिण अफ्रिकाका एक […]
May 17, 2022 sujaLeaveaComment on बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए मानिस जसरी नै च्याउहरु एक आपसमा कुराकानी गर्ने गरेको तथ्य
सञ्चिता पाठक । हामी मानिसहरु सजिलैसँग कुराकानी गर्न र एक अर्कालाई हाम्रो हृदयको व्याख्या सक्छौ ।पशु–पक्षी र रुखको पनि भावना हुन्छ, उनीहरूलाई पनि खुशी र दुःख लाग्छ भनिन्छ । बिरुवालाई पानी दिएपछि र बिरुवाले पानी नपाएपछि मात्रै भावना फरक हुने बुझिन्छ। तपाईले च्याउको सब्जी, अचार, पापड आदि खानु भएको होला । तर के तपाईलाई थाहा […]
उनको जन्म केटीको : अप्रेशन गरेर केटा बनिन् – फेरी केटी मै फर्किइन्
May 17, 2022 May 17, 2022 sujaLeaveaComment on उनको जन्म केटीको : अप्रेशन गरेर केटा बनिन् – फेरी केटी मै फर्किइन्
काठमाडौं । अमेरिकाको मिशिगन सिटीबाट एउटा अनौठो घटना बाहिर आएको छ ।त्यहाँ २७ वर्षीया आलियाले आफू गलत शरीरमा भएको महसुस गरिन् । त्यसकारण उनलाई एक पुरुष बन्न मन लाग्यो, जबकि उनी एक महिलाको रूपमा जन्मेकी थिइन् ।उनी आफ्नो लिंग परिवर्तन गरेर पुरुष बन्न चाहन्थिन् । जब उनले परिवारका सदस्यहरुलाई यो जानकारी दिइन् तब परिवारका सदस्यहरु […]
May 16, 2022 sujaLeaveaComment on थु’क्क मेरो जात ! जोवन चल्ने, भोजन नचल्ने
हिजो एकजना गाउँकै दाइले फेसबुकमा म्यासेज गर्नुभयो हेई शिवानी फ्रेन्ड रिक्वेष्ट पठाएको छु किन एसेप्ट नगरेको रु लेख्नु भएको रहेछ। कसैको मित्रताको अनुरोध स्वीकार गर्ने नगर्ने मेरो खुसीको कुरा हो्र मलाइ ठिक लागे गर्छु नत्र गर्दिनँ झन् हदै चित्त नबुझ्दा उसलाई सधैंको लागि ब्लक गर्ने अधिकार मलाइ फेसबुकले दिएको छ मान्छेहरु किन आफुलाई यति महान […]
May 16, 2022 sujaLeaveaComment on ‘सेक्स’को लागि खेलाैना, सन्तानको लागि ‘बिर्य’ बजारमा किन्न पाइन्छ, अब पुरुषको काम छैन् – साबित्री सुबेदी
सावित्री सुवेदी सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चित नाम हो । उनी पटक–पटक दिने पुरुषविरोधी बयानका कारण चर्चामा आउने गरेकी छिन् ।उनको नयाँ बयान भाइरल भइरहेको छ । ‘विर्य वजारमा किन्न पाइन्छ, पुरुषको काम छैन’ भनेर दिएको बयान विवादमा परेको हो । अभियान्त सुवेदीले एक युट्यब च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो दाबी गरेकी छिन् । सुवेदीले पूर्वेली […]
काठमाडौं । एकसाथ झण्डै दर्जन महिलाहरु गर्भवती भएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । अमेरिकाको एक अस्पतालबाट एउटा अचम्मको घटना बाहिर आएको हो । त्यहाँ अस्पतालमा कार्यरत ११ जना महिला स्वास्थ्यकर्मी एकैसाथ गर्भवती भएकी छन् । जसमा १० नर्स र १ डाक्टर रहेका छन् । ती मध्य दुई नर्सको डेलिभरी मिति पनि एउटै छ । […]
भारतकाे गुजरातमा भएकाे एउटा घटनाले दुनियाँ अ’चम्ममा परेको छ । विवाहका लागि केटा पक्ष र केटी पक्ष दुवै राजी थिए । तर केटाका बुवा:ले विवाहको एक हप्ता अगाडि नै के’टीकी आमा अर्थात् सम्धिनीलाई भगाएपछि, दुवै पक्ष अच’म्मित भएका छन् । सो घट’नाले गर्दा विवाह भने स्थगित भएको छ । बेहुलाका ४८ वर्षीय बुबा व्यापारी हुन् […]
फेसबुकमा कुरा भयो । सुरु मा राम्रै बोल्न थाले । त्यसपछि भेटौ भन्न थाले । शुरुमा त मैले मानेकी थिएन । बाहिर कतै चीसो खानेगरी भेटौ न भनेर कर गरेपछि सहमत भए ।बाहिर कतै चीसो खाने भनेकाले उनको बाईकमा चढे । तर उनले बाहिर कहि खुलेको रहेनछ मैले चिनेको होटलमा जाऔँ भने, मैले इन्कार गर्न […]
May 14, 2022 sujaLeaveaComment on ८ सन्तानकी आमा प्रेमीसँग फरार, प्रहरी चौकी पुग्दा खुल्यो सबै नालीबेली
काठमाडौं । भरतपुरमा ८ सन्तानकी आमा ५८ वर्षीय पुरुषको प्रेममा परे र आफ्नो प्रेमीसँग बस्न गइन् । रोचक कुरा के छ भने ५८ वर्षीय प्रेमीका पनि चार सन्तान छन् । प्रेमीका नातिको पनि विवाह भइसकेको छ । भारत, राजस्थानको भरतपुरमा महिलाका श्रीमानले महिलाका प्रेमीविरुद्ध अपहरणको उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले महिलालाई अदालतमा हाजिर गर्यो । […]